Kufamba neimbwa - Zvaunofunga kufunga nezvazvo
Kufamba nembwa | Zvipfuwo zvezororo
Usati wafamba nembwa
Zviri mukati ye pharmacy yemombe
Chii chiri mumugwagwa wembwa?
Sezvo iri pakupedzisira mune zvakanaka zvakakodzera mhuri yezororo, asi chii chingaita nehunodiwa huno nose? Zviri kuwedzera uye zvakanyanya kufanirwa kutora imbwa pamwe chete parwendo rukuru pane kuipa iyo kune shamwari, hama kana imbwa kennel. Asi kana uchifamba nembwa inofanira kufungwa nezvakawanda!
Mushure mezvose, imbwa dzakawanda dziri nhengo yakazara yakabatanidzwa yemhuri. Panenge mhuri yese yechipiri iri kuronga gara rega rega yezororo, iyo inowedzera zvakawanda kune sangano nekugadzirira. Izvo zvaunofanirwa kubhadhara kune izvo uye zvinofanirwa kuitwa uye zvinotsanangurika musati mazororo, iwe uchawana pano.
Kana munhu asingadi kurasa kambani yaanozivikanwa neshamwari ine mana yakasungwa pamazororo kune dzimwe nyika, munhu anofanirwa kutanga afunga nezvekuenda kwakakodzera. Hasi nyika dzose dzakakodzera pano. Saka hazvisi vanhu chete, asi imbwa inogona kufara nezororo yacho zvakakwana, saka iwe unofanira kutarisana nemunhu mumwe nomumwe anoda.
Kune imbwa, inonakidza zvikuru kana isinganyanyi kupisa uye inonhuwa. Mukuwedzera, panofanira kuva nemumvuri uye imbwa inofanira kupiwa mukana wekusiya basa mukona dema reimba yezororo kana imba.
Unoda kutora hotera muhotera, bvunza zvakananga kana imbwa dzichibvumirwa muhotera zvachose. Kazhinji, zvisinei, izvi zvinokwanisika kwekodhimwe mari shoma.
Iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kunyika. Imbwa inobvumirwa ikoko zvachose here? Ndeipi mitemo yekutungamirira imbwa inoshandisa ipapo? Rwendo rwunoenda sei-nemotokari, chitima kana kunyange ndege?
Kwete kuregererwa ndeye kupinda zvinodiwaiyo inogona kusiyana kubva kunyika kuenda kunyika. Ruzivo runogona kuwanikwa pano zvikurukuru kune mawebsite ezvikwata zvepamusoro (kana rwendo rwuri kukonzerwa neundi ndege) kana yeHoir Office. Semuenzaniso, iyo imbwa inofanirwa kupirwekidzwa mavhiki masere e6 apfuura nekurwisa rabies paunenge uchienda kune imwe nyika, pepipoti yepasitori inofanira kunge yakatorwa pamwe chete.
Sezvo vhiki shomanana kusati kwatanga kwezororo, unofanirwa kuendesa huni yako kumhino kune veterinarian yako uye unoongorora zvakakwana. Kana zvirwere zvichiri kudiwa maererano nezvinodiwa zvekupinda munyika yezororo, taurira vet yako nguva pfupi pashure.
Imwe nyanzvi yezvokurapa ichakuendesa iwe mukukurukurirana pane chero njodzi paunenge uchienda / kune imwe nzvimbo yekuenda uye unotsanangura kuti ndezvipi zvingatorwa zvinofanira kuitika kana pane chero mhaka.
Kunyanya mhuka kune dzimwe nyika dzinowanzowonzerwa nehutachiwana husingazogadziriswa muGermany. Leishmaniasis, heartworms ne ehrlichiosis zvinongova mashoma emirwere uye zvirwere zvinokonzera zvirwere zvinogona kuuraya nokukurumidza. Panyaya iyi: Zviri nani kukurudzira kupfuura kushivirira.
Paunenge uchiputika, zvinokoshawo kuti uise pamwe chete petros pharmacy, iyo inosanganisira kwete chete mushonga wemunhu wako, asiwo zvimwe zvinhu zvingasave zvisina kuitika pazororo:
- Kudzivirirwa kwezuva kune imbwa dzine vhudzi-vhudzi
- Vatengesi, bhandeji yejasi, makumbo asina kumira
- Tora zvese
- Ziso uye nzeve dzinonzwa
- marasha mahwendefa
- Nhamba yeveterinarians uye zvipatara zvemakirini panzvimbo
Hungu, kwete chete munhu anoda chikwata. Iyo imbwa inofanirwa, kana zvisingaiti mumutokisi wake, iine zvose zvaanoda kuti igare yakasununguka uye inofara kugara. Nekutsvakurudza kwakatangwa kare iwe unogona kuchengeta nyore nyore.
Zvinokosha pano - kusiyana nesu isu vanhu vanoda kuwana zvinhu zvakawanda zvitsva pazororo - zvinhu zvakajairika iyo imbwa inoziva uye inoda kubva kumba. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti imbwa inzwe zvakanaka kubva kumba.
Mumutsipa wembwa paunofamba nembwa ndeyekuti:
- kazhinji kudya, kubata, chekupa mapfupa
- Zvokudya uye kunwa ndiro
- Imbwa basket / pillow / blanket
- Zvichienderana nekunaya kwekushisa mune nzvimbo yekutsvaira mafaro
- Bhuku rekufamba nemvura
- matoyi / zvinhu zvakasungirirwa
- Yakagadzirwa kufamba pharmacy
- Muzzle, kana zvichidiwa
- Leash, harness, collar
- Taura mazita nekero yeimba / hotera & nhamba yefoni
- Kotbeutel, imbwa nziyo
- Mhosva yemishuwarensi yemhosva
- Kuchengetedza paws, meso uye jasi
- jacket yeupenyu
Wakambofunga nezvezvinhu zvose kuitira kuti imbwa yako inogona kunzwa zvakanyanya pazororo sezvamunoita here? Icho chiongorori chinobviswa uye iyo imbwa inotakura bhokisi inofananidzirwa kumamiriro ekudzidzira uye pipipoti yepachipi mune muhomwe?
Zvadaro tinokuda iwe hovha inonakidza uye yakanaka ine imbwa!
Holiday with dog | Mazororo anofamba
Kuchengetedza peji yemwana nembwa
Inyoka inopenya peji nemoyo
Mazororo nevana | Mazororo & Kufamba
Nzira yekupeta imbwa
Inyoka inopenya peji uye puppy
Mazororo echando | Vacation mazororo travel